Accueil > Gazetin'ny nosy > Vondrona eraopeana : Izy mangalatra ny antsika indray no avo vava
Naneho ny heviny tao amin’ny gazety namana iray mpiseho isan’andro eto ny Masoivohon’ny Vondrona Eraopeana miasa eto Madagasikara, dia i Giovanni Girolamo. Isan’ny voalazany tao fa “teboka misakana ny tsy hitohizan’ny fifanaraham-piaraha-miasa vaovao eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eraopeana ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny jono andranomasina eto”. Ny fahavitan’ny sonia amin’io fifanarahana amin’ny jono andranomasina io no sandan’ny fahazoantsika Malagasy ny famatsiam-bola isan-tsokajiny, ka isan’izany hono, ny hoe hiakaran’ny “haba amin’ny fanjonoana andranomasina” (redevances de pêches) hatramin’ny 40 tapitrisa euros.
Ny hazan-dranomasintsika anefa dia mahatratra hatramin’ny 800 tapitrisa Euros isa-taona no voaroba ary ry zareo Eraopeana dia tsy afa-bela amin’io halatra hazan-dranomasina aty amintsika io.
Tsinjo ihany koa fa mbola misy vola eo amin’ny 20 tapitrisa Euros eo tsy mbola nomen’ny Eraopeana amin’ilay andiany faha-11 amin’ny Tahiry Eraopeana momba ny Fampandrosoana (Fonds Européen pour le Developpement = FED). Tamin’ny 2014 izy io no azontsika ary nahatratra 518 tapitrisa Euros, ka tokony nifarana ny 2020 teo. Mbola misy antontan-taratasy takian-dry zareo Vondrona Eraopeana, hono, mba hivoahan’io 20 tapitrisa Euros farany io, dia ny momba ny fitantanan’ny governemanta Malagasy ny famatsiam-bola niatrehana ny Covid 19 sy ny tontolon’ny ady amin’ny kolikoly.
Tsy manamaivana ny fitakian-dry zareo isika satria na nisy io fitakian’ny Vondrona Eraopeana ny mangarahara momba ny volan’ny Covid 19 io na tsy nisy, ary na nisy ny fitakian-dry zareo momba ny ady amin’ny kolikoly na tsy nisy dia adidintsika Malagasy ny manome lanja ny fampivainganana izany satria mahasoa ny firenentsika na ny fangaraharan’ny fitantanam-bola na ny fampahombiazana ny ady amin’ny kolikoly. Lasa miseho azy ho miana-kendry ny Vondrona Eraopeana ka izy indray no manome lesona antsika nefa ry zareo aza mandroba ny harenantsika ao andranomasina ao.